Author: Kagagul Nikoshakar
Agaasimayaasha Guud ee Wasaaradaha iyo hay’adaha; d. Magaalo-madaxda Jamhuuriyadda Somaliland waa Hargeysa.
Dawladdu waxay horumarinaysaa hiddaha iyo dhaqanka suubban ee bulshada, waxayna tirtiraysaa somaliand wax u dhimaya Diinta, horumarka, dhaqanka iyo caafimaadka bulshada. Inay qabtaan xil kale oo Qaran inta ay xilka Guddida hayaan. Go’aan qaadasho ku timaadda talo-wadaag.
Garsoorku waxa uu awood gaar ah u leeyahay: Waxa Madaxweyne ama Ku-xigeen Madaxweyne loo dooran karaa qofka buuxiya shuruudaha soo socda: Midabka sare waa Doog, dhexdiisana ay ku qoran tahay Laa-llaaha llla-Lahu Muxamedu Rasuul-Allaah oo Far-Carabi ah, oo midab cad ah; midabka dhexe waa caddaan ay badhtanka kaga taallo xiddig madow oo shan geesley ah, madaxyo simanna leh; midabka hoose waa casaan saafi ah. Labada Gole ee Baarlamanku waxay yeelanayaan fadhiyo ay wadaagaan iyo kuwo gaar u kala ah.
Xorriyadda Dhaq-dhaqaaqa iyo Is-abaabulka. Maxamadaha ciidamadu waxay gaar u yihiin dhegaysiga dembiyada ciqaabta ee lagu oogo xubnaha ciidamada Qaranka xaaladaha nabadda iyo dagaalka. Mowduucyada la xiriira Soomaaliya. Labada Gole mid waliba Golaha kale hal mar oo keliya ayuu mashruuc-sharci ku soo celin karaa.
Dib-u-dhigid fadhi wuxuu ku ansaxayaa aqiabyad fudud hal dheeri ; waxaana dib loo dhigi karaa ugu badnaan toddoba 7 maalmood. Barashada iyo tarbiyadda Diinta lslaamku waa dariiqad asaasi ah; dhammaan heerarka waxbarashadana waa ku khasab, isla markaana horumarinta dugsiyada Qur’aanku waa waajib saaran Dawladda.
Waxa u fadhiisanaya xukunka eedayntaas Golaha Guurtida oo uu Guddoomiye ka yahay Guddoomiyaha Maxkamadda Sare oo dhagaysanaya dacwadda dasuurka soo oogayaan Guddida ay igmadeen Golaha Wakiiladu, iyadoo Madaxweynahu ama Madaxweyne-ku-xigeenku isaguna yeelanayo qareemo gaar ah oo difaaca.
Haddii uu istiqaalad dhiibo somalilabd uu geeriyoodo. Guddoomiyaha Maxamadda Sare oo isla markaana ah Guddoomiyaha Maxamadda Dastuuriga ah ayaa dhaarinaya cid kasta oo Dastuurku ku waajibiyey dhaartan Dastuuriga ah, ka hor inta aanu xilkiisa bilaabin; sidoo kale waxaa isagana dhaarinaya Madaxweynaha.
Sidoo kale Madaxweynaha waxaa u bannaan in uu u wakiisho Ku-xigeenka Madaxweynaha ama Wasiir kasta ka qayb-galka fadhiyada Golaha Wakijiada. Haddii uu xukun ciqaabeed oo kama damays ahi ku dhaco.
Muuqaalka Akhri Itusi xogta Itusi taariikhda. Mabaadi’da talo-wadaagga iyo hannaanka xisbiyada badan.
Si ay u suurta gasho qaban-qaabinta Aftidu, waxa waajib ah in la soo saaro Somaluland Aftida iyada oo laga shiidaal-qaadanayo tilmaamaha Dastuurku asteeyey; waxaana la magacaabayaa guddida qaban-qaabinta Aftida si waafaqsan Dastuurka. Saxeexa heshiisyada caalamiga ah.
Habaynta nidaamyada dhaqaale iyo kuwa lacageedba. Madaxweynaha ayaa guddoomin doona fadhiyada Golaha Wasiirada ee caadiga ah iyo kuwa aan caadiga ahayn.
Wasiirada iyo Wasiir-ku-xigeennada waxa ku waajib ah inay ka qayb galaan fadhiyada Golaha Wakulada iyo Guddiyadiisa haddi somalilan lagaga codsado sidaa; waxaanay xaq u leeyihiin inay dastukrka qayb qaataan doodda; hase yeeshee xaq uma laha codayn. Xeerarka dalka waxaa laga qaadanayaa Shareecadda lslaamka; waxaana reebban wixii xeer ah ee ka soo horjeeda.
Inaanu hore ugu dhicin xukun ciqaabeed oo maxkamad horteed kaga caddaaday shantii sanno ee ugu dambaysay. Dawladdu waxay mudnaanta koowaad siinaysaa waxbarashada asaasiga ah; waxaanay u hawl galaysaa in gobollada iyo degmooyinka lagu baahiyo waxbarashada asaasiga ah. Soddon 30 maalmood gudohood marka Golaha Wakiiladu ansixiyaan magacaabidda Wasiir ama Wasiir-ku-xigeen, waxa xilka u dhaarinaya Guddoomiyaha Maxkamadda Sare iyada oo uu goob joog yahay Madaxweynaha ama Madaxweyne-ku-xigeenka, haddii uu Madaxweynuhu ka maqan yahay dalka ama uu buko.
Xuquuqda Qofka Xorriyadda laga qaaday. Golaha Wakiilada waxa Ia kala diri karaa: Fadhiga ugu Horeeya ee Golaha Guurtida. Mashruuc-sharci waxa uu xeer ku noqonayaa ansixinta Golaha Wakiilada waxaanu dhaqan gelayaa ka dib marka uu Madaxweynuhu saxeexo sida ku cad Qod.
Golaha Wakiiladu waa xubno ka wakil ah dadweynaha; waana Qaybta laad ee Xeer-dejinta dalka, ansixinta xeerarka, oggolaanshaha iyo ilaalinta siyaasadda guud ee hoggaaminta dalka.
Siyaasadda iyo Xukunka Somaliland. Waxaa xilka ka qaadi kara madaxda qodobkan ku sheegan Madaxweynaha oo keliya.